ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးဦးသန်းထွန်း သာပေါင်းမြို့နယ် ဇီးဖြူကွင်းအုပ်စု တောင်ယာကျေးရွာမှ ဒေသခံရပ်မိရပ်ဖပြည်သူများနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ – USDP
ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးဦးသန်းထွန်း သာပေါင်းမြို့နယ် ဇီးဖြူကွင်းအုပ်စု တောင်ယာကျေးရွာမှ ဒေသခံရပ်မိရပ်ဖပြည်သူများနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ
January 20, 2020 January 20, 2020 usdpLeaveaComment on ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးဦးသန်းထွန်း သာပေါင်းမြို့နယ် ဇီးဖြူကွင်းအုပ်စု တောင်ယာကျေးရွာမှ ဒေသခံရပ်မိရပ်ဖပြည်သူများနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းထွန်းသည် ယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းက သာပေါင်းမြို့နယ် ဇီးဖြူကွင်းအုပ်စု တောင်ယာကျေးရွာမှ ဒေသခံရပ်မိ ရပ်ဖများ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွား ရေး၊ လူမှုရေးနှင့် မိမိတို့၏ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကာကွယ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ ပါတီ၏ မူဝါဒ လမ်းစဉ်များကို
ရှင်းလင်းချပြဆွေးနွေးခြင်း၊ တက် ရောက်လာကြသည့် ဒေသခံရပ်မိ ရပ်ဖများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုများကိုလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြန်လည်ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ နံနက်ပိုင်းတွင် ဗဟို အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းထွန်းသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသာပေါင်း မြို့နယ်ပါတီရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ တွင် မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ကျေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေး မှူး၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လုပ်ငန်းညှိ နှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး က ရပ်ကျေးပါတီဥက္ကဋ္ဌများ၏ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကို ရှင်းလင်းချပြဆွေးနွေးခြင်း၊ ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက် စည်း ရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို အားသွန် ခွန်စိုက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွား ကြရန်မှာကြားခြင်း၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများအလိုက် ဆောင်ရွက်ရ မည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်များ၏ ဆောင် ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး ပါတီအောင် နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးက အောင်နိုင်ရေးနှင့်ပတ် သက်သည်များကို စသတနမ စသငညအ ဖြင့် ချပြရှင်းလင်း၍ မိမိတို့နယ်မြေ ဒေသအသီးသီး၏ လိုအပ်ချက် များကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတင် ပြခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ချိုသာသောနှုန်းထားဖြင့် ဆန်များရောင်းချပေး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) မိုးညို မြို့နယ် ပါတီဝင်အဆိုပြုလွှာပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးတက်ရောက်
March 20, 2018 usdp
မလှိုင်မြို့နယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပညာရေးစုံညီပွဲတော်တက်ရောက်၍ စာရေးကိရိယာများလှူဒါန်း
January 15, 2020 January 15, 2020 usdp
ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အနှေးယာဉ်လုပ်သားများအား ဆန်များလှူဒါန်းခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းများပြုလုပ်
April 1, 2020 April 1, 2020 usdp
August 11, 2020 August 11, 2020 usdp
Covid ကာလအတွင်း အခက်အခဲရှိနေသူ ပြည်သူများ အား ရွှေပြည်တော်သို့ဆုံမှတ် အသင်းမွ ဆန်အလှူတော် ပြုလုပ်ရာသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဥက္ကဌလာရောက်အားပေး
ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံ ဦးမြင့်စိုး ဝန်းသိုမြို့နယ်ရှိစာသင်ကျောင်းများသို့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများလှူဒါန်း
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ငြိမ်း)သူရမြင့်မောင် ပေးပို့လှူဒါန်းသော ဆွမ်းဆန်တော်နှစ်အိတ်နှင့် ဝတ္ထုငွေများ သုံးခွမြို့၌ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း
ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ခြေနင်းအမှိုက်ပုံးများ အခြေခံပညာအထကကျောင်း(ခြဲ)သို့ လှူဒါန်း
agenzie traduzioni roma commented on ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ရွှေခြံဓမ္မရိပ်သာကျောင်းရှိ အောင်ဇေယျအောင်ရွှေဂူကြီးဘုရား ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲသို့ အလှူငွေနှင့်ဆွမ်းဆန်တော်လောင်းလှူ: Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed
torrentfilmi commented on ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ရွှေခြံဓမ္မရိပ်သာကျောင်းရှိ အောင်ဇေယျအောင်ရွှေဂူကြီးဘုရား ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲသို့ အလှူငွေနှင့်ဆွမ်းဆန်တော်လောင်းလှူ: Heya i am for the first time here. I found this bo
먹튀검증업체 commented on မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တိုင်း ခရိုင် မြို့နယ်ပါတီများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တက်ရောက်အမှာစကားပြော: I do trust all of the ideas you've introduced to y
adreamoftrains best web hosting commented on မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တိုင်း ခရိုင် မြို့နယ်ပါတီများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တက်ရောက်အမှာစကားပြော: Thank youabunch for sharing this with all people
best website hosting commented on မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တိုင်း ခရိုင် မြို့နယ်ပါတီများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တက်ရောက်အမှာစကားပြော: Nice blog right here! Also your website lots up fa
USDP | Copyright © WLT	| Theme: News Portal by Mystery Themes.